Vaovao - Paompy Peristaltika avo lenta WSP3000
Ny paompy peristaltika dia manana ny mampiavaka azy tsara sy avo marina. Ankoatry ny fepetra takiana amin'ny fametrahana mazava tsara sy marina ao anatin'ireto fampiharana indostrialy mifandraika ireto dia misy ihany koa ny takiana tena ilaina amin'ny fahombiazana avo lenta sy ny automatisation, izay olana maro koa izay mila vahana.
♦ Ny firafitry ny fantsona faneriterena mihodina dia mitondra fahombiazan'ny asa lehibe tokoa, ary ny fahombiazan'ny famenoana dia mety hahatratra 120 tavoahangy / min.
♦ Ny fotoana famenoana dia 0 (loop tsy manam-petra) ~ 9999 fotoana.
♦ Ny fetra ambany amin'ny haavon'ny famenoana dia mety hahatratra 1μl, ary ny fetra ambony dia mety hahatratra 3000μl. Fahombiazan'ny famenoana avo, isan-karazany amin'ny fotoanan'ny fanangonam-bolo, mba hanomezana fahafaham-po ny filanao fahombiazana.
♦Ny efijery fijerena loko 7-mirefy famaritana avo lenta dia afaka mahita mazava tsara ny masontsivana sy ny toe-piasa miasa ankehitriny; ny interface an'ny masinin'olombelona dia afaka mampiditra mivantana ireo masontsivana koa ao anaty rano, izay tsotra ampiasaina ary manana traikefa ifaneraserana amin'ny solosaina olombelona.
♦ Ny endrika maodely, mora manitatra, kely habe, paompy marobe dia azo alefa mba hamorona rafitra famenoana fantsona maro, ny fetra farany ambony dia afaka manohana ny cascade 16-fantsona.
♦ Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tanana na ampiasaina amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy, miaraka amin'ny fomba fiasa miovaova kokoa, safidy betsaka kokoa ary fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
Na dia amin'ny cascading 16-fantsona aza dia afaka mitazona gadona mirindra sy fahombiazana avo lenta, manampy ny mpampiasa hanatsara ny tombony ara-toekarena.
Ny teknolojia mahomby amin'ny paompy peristaltika microfiter WSP3000 dia ho lasa firoboroboan'ny famenoana mikraoba amin'ny ho avy.